Amagumbi okupheka ayathengiswa kwaye ayaqeshiswa kwiRealWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Amagumbi okutya
Ukutya lishishini lokubonelela ngenkonzo yokutya kwindawo ekude okanye kwindawo enjengehotele, indlu yoluntu (i-pub), okanye kwenye indawo. Ukupheka kuye kwavela ekubeni yinto yobugcisa. Abathengi ngoku benza amava abandakanya iimvakalelo. Eyona ngxelo yakudala yeenkonzo eziphambili ezenziweyo e-United States yibhola ye-1732 ePhiladelphia eqinisekiswe nguKesari Cranshell ukubhiyozela ukumka kuka-General General William Howe. [I-1] ishishini lokugcina ubutsha liqale ukwenza malunga ne-1820, kumantla ePhiladelphia.   Ukupheka kuyinto eshishini ehlonelwayo neluncedo. Umzi mveliso wokutya wokuqala wamkelwa ngabantu base-Afrika-baseMelika.